ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: 9/1/09 - 10/1/09
ဒေါ်စုလွှတ်ရေး အာဆီယံ ပန်ကြားမယ့် အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်း
အာဆီယံ အရှေ့တောင်အာရှ အသင်းကြီးက သူတို့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရထံကို မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့မယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ် ရှိခဲ့ပေမဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိတဲ့ မူဝါဒကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေတာကို အကြောင်းပြုပြီး အဲဒီအစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တက်ရောက်ဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ကို ရောက်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ပီရွမ်း (Kasit Piromya) က ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ အာဆီယံအသင်းကြီးရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်ကို နောက်ပြန်ဆွဲစေတဲ့ လုပ်ရပ်တခု ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အားပေးတဲ့ အာဆီယံ လွှတ်တော်အမတ်တချို့က ရှုမြင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ပီရွမ်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အာဆီယံအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံမယ့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီလို့ ပြောဆိုတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေ ချဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တိုက်တွန်းခဲ့တာမျိုးလည်း မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
AIPMC မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အာဆီယံ လွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ရိုးရှန်း ဂျေဆင်ကတော့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူကို ကျင့်သုံးရေး စဉ်းစားလာတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မတရား ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေးကို အာဆီယံက မတောင်းဆိုဘူးဆိုတာ သိပ်ကိုမှားယွင်းတယ်လို့ သူ့ရဲ့အမြင်ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အနေနဲ့ရော အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နောက် အာဆီယံ တခုလုံးအနေနဲ့ ဒီကိစ္စက ရေတိုကိုပဲကြည့်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတခုလို့ ကျနော်တို့က မြင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအတွင်း ဘယ်လို ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ကိုင် ချဉ်းကပ်မလဲဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာကို ပြသနေတယ်” လို့လည်း AIPMC အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ရိုးရှန်း ဂျေဆင်က ပြောသွားတာပါ။
အာဆီယံဟာ နိုင်ငံတကာက မြန်မာ့အရေးကို အာရုံစိုက်ပြီး အလေးပေး ပြောလာတဲ့ အချိန်အခါမျိုး၊ အစည်းအဝေးတွေ အခမ်းအနားတွေမှာသာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုတာမျိုးတွေ ရှိနေတာက စိုးရိမ်စရာတခုလို့ သူက မြင်ပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးတဲ့အခါတွေမှာ အာဆီယံက သူတို့ကလည်း လိုက်ပြီးရွေ့တယ်။ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့လည်း လုပ်နေပါတယ်ဆိုတာမျိုး ပြောဆိုချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့က သူတို့ပြောတဲ့ စကားတွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ နောက်ဆုတ်သွားတာပါပဲ။ ဒါမျိုးကို ကစားကွက်တခုအဖြစ် သုံးနေတာ စိုးရိမ်စရာပါပဲ။” လို့ AIPMC အဖွဲ့ရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ရိုးရှန်း ဂျေဆင် ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအကြား လက်ခံထားမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်အောင် အားယူနေတဲ့ အာဆီယံရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို နောက်ပြန်ဆွဲသလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ NCGUB ပြည်ပရောက် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက အခုလိုမြင်ပါတယ်။
“အပြစ်မရှိတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုဆင် ထောင်ချခံရခြင်းဟာ အာဆီယံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို ချိုးဖောက်ခြင်းခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နည်းတူ အာဆီယံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းတခုလုံး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့အပေါ်မှာ ရပ်တည်ပြီးတော့၊ အာဆီယံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအပေါ်မှာ ရပ်တည်ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ဆက်ပြီးလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအနေနဲ့က နအဖနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆုတ်ယုတ်စေတယ်ဆိုတာကို အာဆီယံအနေနဲ့ သတိထားပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။”
ဦးခွန်မြင့်ထွန်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
AIPMC ရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ရိုးရှန်း ဂျေဆင်ကတော့ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထောက်ပြနေတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥပမာတခုသာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုဒေသတွေ၊ မကြာသေးခင်က ကိုးကန့်ဒေသနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေလို တခြား လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကိုလည်း အာဆီယံအနေနဲ့ ကြည့်ဖို့လိုမယ့်အကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဖိနပ်ဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံရသည့် နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း
Posted by flyingpeacock at 8:03 PM 1 comments
အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ထံ ပေးစာ
Posted by flyingpeacock at 10:19 PM0comments
2009년 9월 27일 일요일 오후 3시부터 5시 까지 NLD 한국지부는 경기도 부천시 원미구 심곡 2동 NLD 한국지부 사무실에 버마 내 NLD 설립 21주년 기념식을 했습니다.
NLD (LA) Korea Branch held 21 years anniversary of NLD Foundation Day in Burma NLD (LA) Korea Branch's office in Pucheon from 3:00 PM to 5:00 PM on September 27.
၂၀၀၉ ခုနစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် ညနေ ၃နာရီမှ ၅ နာရီအချိန်ထိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြေနယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲ၏ ရုံးခန်း၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း ၂၁ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကို ကျင်းပပါသည်။
၁။ အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ခြင်း
၂။ အလံတော်အား အလေးပြုခြင်း
၃။ ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းများအား အလေးပြုခြင်း
၄။ ဦးအောင်မြင့်ဆွေ (ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြေနယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲ)က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
၅။ တက်ရောက်လာသူများက အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း
၆။ အခမ်းအနား ရုပ်သိမ်းခြင်း
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးသောင်းထွန်း (ရုံးအဖွဲ့မှူး၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြေနယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲ)က ဆောင်ရွက်ပါသည်။
Posted by flyingpeacock at 8:16 PM0comments
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေဗန့ နံနက် ၁၁နာရီအချိန်မှ ၁၂ နာရီအချိန်ထိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲက ဦးစီး၍ နှစ်နှစ်မြောက် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ပြုလုပ်ပါသည်။ အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲံသို့ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှု (ကိုရီးယား)၊ ကရင် လူငယ်အစည်းအရုံး (ကိုရီးယားဌာနခွဲ)၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း(ကိုရီးယား)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးဇော်မိုေးအာင် (တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ၂၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲ) က ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထူးကြေငြာချက်အမှတ် - ၅ / ၀၉ / ၀၉
Posted by flyingpeacock at 9:41 AM0comments
သမီးဆန္ဒအတိုင်း အမျှ မဝေသေးဘူး
ထိုစဉ်က ဖြစ်ရပ်တချို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများထဲတွင် အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တနေ့ ဖြစ်သော စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူ ဆန္ဒပြကျောင်းသူ မ၀င်းမော်ဦး၏ ဓာတ်ပုံမှာ အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်ပုံများထဲတွင် ပါဝင်သည်။
ဖြေ။ ။ အခုလက်ရှိ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း သူတို့ တောင်းထားတဲ့၊ နောက်ပြီးတော့ ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့ပဲ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ ( ဧရာဝတီ )
Posted by flyingpeacock at 10:13 AM0comments
နအဖ စစ်သံရုံးရှေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံး လွတ်ပေးရေးအတွက် တဦးချင်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုပွဲ
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအချိန်ထိ ဆိုးလ် (ဆောအုလ်) နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ သံရုံးရှေ့၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲက ဦးစီး၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံး လွတ်ပေးရေးအတွက် တဦးချင်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုကြပါသည်။
NLD (LA) Korea Branch held solo demonstrated for immediately release Daw Aung San Suu Kyi in Burma, in front of Burma Junta's Embassy in Seoul from 10:00 AM to 12:00 AM on September 22, 2009.
This solo demonstrated jointly staged Chin National Community (Korea) and Nanum Munhwe (Korean Organization)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် ပေးဖို့ NLD တောင်းဆို
အထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တချို့က မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျင်းပဖို့ စိုင်းပြင်းနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး NLD တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘန်ကောက်ကနေ ဗွီအိုအေ ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
NLD ပါတီရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို အာဏာပိုင်တွေက ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အတွက် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပါတီ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးဖို့ တွေ့ခွင့်ပြုပါလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီမှာ တင်ပြ တောင်းခံထားတဲ့အကြောင်း NLD သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ၁၆ ရက်နေ့က ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အန်ကယ် ဦးတင်ဦး အပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့တွေ မျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံဖို့၊ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံတာကို ခွင့်ပြုဖို့ဆိုပြီး နအဖဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို စာရေးပြီး တင်ပြတောင်းဆိုထားတာပါ။”
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ကတည်းက စာပို့ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ထိ ဘာမှ အကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့လည်း ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။ အခုအချိန်ကာလမှာ NLD ရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့ ထပ်ပြီး အကြောင်းကြားတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကိစ္စလည်း ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။
“လူကြီးတွေ တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်တာပေါ့။ ဥပမာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး၊ မ၀င်ရေးပေါ့၊ ကျနော်တို့ လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့ မူအရကတော့ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်း ရပ်တည်ချက် အတိုင်းပဲလေ။ သို့သော် လူကြီးတွေတွေ့ပြီး ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ သူတို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆွေးနွေးကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။”
NLD ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်၊ မ၀င်ဘူး ဆိုတာကို ခုချိန်ထိတော့ တရားဝင် မကြေညာသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေထဲက ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ မကိုက်ညီတာတွေကို ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့နဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့မေလက ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်း ထုတ်ပြန်ပြီး သဘောထား ပေးထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး၊ မ၀င်ရေး ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် အဲဒီအချက်တွေကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က အရင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ဒီအချက်တွေကို အကြောင်းပြန်ကြားတာမျိုး မရှိသလို လုပ်ဆောင်ပေးတာလည်း ခုချိန်ထိ မရှိသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အကျဉ်းသား ၇,၀၀၀ ကျော် လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အထဲမှာလည်း ခုချိန်ထိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၂၀ ကျော်ပဲ ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို တောင်းဆိုပေမဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စကိုတော့ ပြောဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် NLD အပါအ၀င် လက်ရှိ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကိစ္စ စဉ်းစားဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆိုတာတွေတောင်မှ ရှိပါတယ်။
တရားဝင် မှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတချို့က ဆိုင်းဘုတ်တင်တာတွေ၊ စုဝေးဆွေးနွေးတာတွေကို အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်ပြုထားပြီး NLD လို တရားဝင်ပါတီတွေကိုကျ ရုံးခန်းတွေတောင် ဖွင့်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက် တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလိုပဲ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ခွင့်ပြုဖို့ မကြာသေးခင်ကဘဲ NLD ကနေ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီ စာရေးသား တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ခုချိန်ထိ အကြောင်းပြန်ကြားချက် မရသေးပါဘူး။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 11:03 AM0comments
“မနေ့က နေ့ခင်းပေါ့။ ဆရာ တင်မျိုးဝင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ဆေးအဖွဲ့ပေါ့။ ၀င်ခွင့်ရပါတယ်။ ဆရာတင်မျိုးဝင်းနဲ့လည်း နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သေးပေါင်နည်းနည်း ကျနေတယ်တဲ့ အဲဒီလို ပြောပါတယ်။ ”
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ခရိုင်တရားရုံးက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ထောင်ဒဏ်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်တရားရုံးမှာ အယူခံလွှာတင်သွင်းခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကပဲ နှစ်ဘက် အကျိုးဆောင်တွေ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှာ လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ တရားရုံးက အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့ ရုံးချိန်း ပြန်ပေးထား ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသလို ဘယ်လိုပြစ်မှုမျိုးကိုမှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် တခြား ပယောဂ တွေမပါဘဲ ဥပဒေကြောင်းအတိုင်း စီရင်ခံရမယ်ဆိုရင် ပြစ်ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်လာမယ်လို့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေက အခိုင်အမာ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျား။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:59 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ မြန်မာ့အရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ ၃၀ မီနစ်အချိန်မှ ၅ နာရီအချိန်ထိ ပူချွန်းမြို့ရှိ အမျိုးသားးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ကိုရီးယားဌာနခွဲ၏ ရုံးခန်း၌ ဦးစိုးအောင်နှင့် ဦးသွင်လင်းအောင်တို့က အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြပါသည်။
Posted by flyingpeacock at 9:32 AM0comments
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆန္ဒပြသပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
2nd Anniversary of September Revolution in Korea
Posted by flyingpeacock at 1:26 PM0comments
Invitation to All Burmese in Korea
Posted by flyingpeacock at 10:59 PM0comments
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတဦးကို သရက်ထောင်ထဲ ပြန်ထည့်
မကွေးတိုင်း၊ သရက်မြို့ အကျဉ်းထောင်ရှိ နိုင်ငံရေးသမားတဦးကို ယမန်နေ့က ပြန်လွှတ်ရန် အာဏာပိုင်တို့က စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ နိုင်ငံရေးသမားက ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ထိုးခြင်း မပြုသဖြင့် ပြန်လည် အကျဉ်းချလိုက် သည်ဟု သိရသည်။
ထိုသို့ ပြန်လည် အကျဉ်းကျသွားသူမှာ နှစ်ရှည် အကျဉ်းသား ဦးဘမျိုးသိန်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“၄၀၁ မထိုးလို့ ပြန်ထည့်လိုက်တယ်” ဟု သရက်မြို့ အကျဉ်းထောင်သတင်းများကို စောင့်ကြည့်နေသူတဦးက မိုးမခကို ပြောသည်။
၄၀၁ ဟူသည်မှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၁ ကို အတိုကောက် ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန်ရှိနေသည့် ထောင်ကျနှစ်များကို လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပေးလိုက်သော်လည်း အနာဂတ်တွင် ပြန်လည် အကျဉ်းကျပါက ယခင် ထောင်ကျနှစ်များကိုလည်း ပူးတွဲ ခံစားရမည်ကို သဘောတူပါကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၄၀၁ အရ လက်မှတ်ထိုးခြင်းဟု ခေါ်ကြသည်။
လက်မှတ်ထိုးရန် သဘောမတူသည့် ဦးဘမျိုးသိန်းသည် လွတ်ရက်စေ့ရန် ၂ လသာ လိုတော့သည်ဟု သိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်ရှိစဉ်က ကုလသမဂ္ဂသို့ စာရေးသားပေးပို့သဖြင့် စစ်အစိုးရက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်သည်။ ဦးဘမျိုးသိန်း အကျဉ်းချခံနေရသည့် နှစ်ပေါင်း ၁၉ နှစ် ရှိပြီ ဟု သိရသည်။ ( မိုးမခ )
Posted by flyingpeacock at 10:36 PM0comments
စစ်တပ် အာဏာသိမ်းသည့် ၂၁ နှစ်မြောက် နအဖ စစ်အစိုးရအား ကန့်ကွက်သည့် ဆန္ဒပြသပွဲ ( ကိုရီးယား )
2009년 9월 18일 금요일 낮 12시부터 1시 까지 NLD 한국지부 당원들은 국가 평화 개발 위원회 군부의 대사관 앞에 군사독재 쿠데타 21주년 반독재 일인 시위를 하였습니다.
NLD (LA) Korea Branch held solo demonstrated 21 years anniversary of Military Junta's Coup Day in Burma in front of SPDC's Embassy in Seoul from 12:00 AM to 1:00 PM on September 18.
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် သောကြာနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ၁ နာရီအချိန်ထိ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းသည့် ၂၁ နှစ်မြောက် နအဖ စစ်အစိုးရအား ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲက အဖွဲ့ဝင်များသည် နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ သံရုံးရှေ့၌ တဦးချင်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုကြသည်။
Posted by flyingpeacock at 4:22 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းက အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အကျဉ်းသားတွေထဲက ထောင်ဂဏန်းနဲ့ချီပြီး ပြန်လွှတ် ပေးမယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့လိုတယ် လို့လည်း ထပ်ပြီး သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အစိုးရက ထောင်ဂဏန်းချီတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးနေပေမယ့်လည်း ဒီအထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကတော့ မဆိုသလောက်သာ ပါဝင်နေတာမို့လည်း လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဒါဟာ မလုံလောက်ဘူးလို့ ဆိုနေကြတာပါ။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက အကျဉ်းသား ၇,၀၀၀ ကျော် လွှတ်ပေးမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြီး နောက်တနေ့ မနေ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်း အကျဉ်းထောင်တွေက အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ ပါဝင် လာတာမို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကြိုဆိုလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေအပေါ် သူ အစော ပိုင်းက တိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုတယ် လို့လည်း ထပ်ပြီး သတိပေး ခဲ့တဲ့အကြောင်း နယူးယောက်ခ် ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာ မနေ့တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အတွင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ မီရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michele Montas) က ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
"မနေ့က ကြာသပတေးနေ့မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တချို့ လွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အပါအ၀င် မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားလောက်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကိုလှမ်းပြီး တုန့်ပြန်သွားဖို့ အတွက်ကိုလည်း မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်က တောင်းဆိုထား တာပါ။"
စည်းကမ်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်လာတဲ့ နိုင်ငံသား အကျဉ်းသား အကျဉ်းသူပေါင်း ၇,၁၁၄ ယောက်ကို တိုင်းပြည် အကျိုးပြုဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ရော၊ အကျဉ်းကျနေသူတွေရဲ့ မိသားစုတွေကို ထောက်ထားငဲ့ညှာတဲ့ အနေနဲ့ရော လူသားချင်း စာနာထောက်ထားပြီး ကျန်နေတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကနေ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာ စစ်အစိုးရက ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာခဲ့ပြီ နောက်တနေ့မှာတော့ ပထမအသုတ် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း အကျဉ်းထောင်တွေက အကျဉ်းသား ရာဂဏန်းလောက် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အထဲမှာ အတိုက်အခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အဲန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီဝင်တွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သံဃာတော်တွေ၊ စာနယ်ဇင်းသမား တချို့နဲ့အတူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၀ လောက် ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လို့ အခုအချိန်အထိ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာက ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ တောင်းဆိုနေတဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကို ပြန်လွှတ်ပေးမလား ဆိုတာကတော့ မသေချာလှပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး ပြဿနာ တွေကို ပြေလည်စေရေး အတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီလို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားသူတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
"အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးတည်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းတဲ့ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ကျန်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးနိုင်မဲ့ နောက်ထပ် လုပ်စရာရှိတာတွေ ဆက်လုပ်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်း ထပ်လောင်း တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။"
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ မီရှဲလ် မွန်းတပ်စ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရက အကျဉ်းသားတွေ မကြာခဏ ဆိုသလို လွှတ်ပေးတာမျိုးတွေ ရှိပေမဲ့ ဒီအထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကတော့ မဆိုသလောက်သာ ပါဝင်ခဲ့တာမို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာသူတွေက ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလထဲမှာတုန်းက အကျဉ်းသား ၉,၀၀၀ ကျော်၊ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ တုန်းကတော့ ၆,၀၀၀ ကျော် လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ဒီအထဲမှာ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရတဲ့ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာ ဦးဝင်းတင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆယ်ဂဏန်းလောက်သာ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်တဲ့ (Amnesty International) က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သုတေသန အရာရှိ တဦးဖြစ်တဲ့ ဘင်န်ဂျမင် ဇ၀က်ကီး (Benjamin Zawacki) ကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ပြေလည်စေရေးအတွက် ဆိုရင် တော့ ဒီနှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးနေလို့ မရဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
"နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထက် နည်းနည်းမှ မလျော့ရဘူး ဆိုရင်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ၂,၂၀၀ စလုံးကို တကြိမ်တည်းနဲ့ အစိုးရက အကုန်ပြန်လွှတ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ လွှတ်ပေးနေတဲ့ ပုံစံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့၊ ၆ လကနေ ၁ နှစ်လောက်အတွင်း တကြိမ်စီ၊ ဆိုပါတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅ ယောက်ကနေ ၂၅ ယောက်လောက်အထိပဲ လွှတ်ပေးနေတာကတော့ သိပ်ကို နည်းလွန်းပါ တယ်။"
နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (Amnesty International) က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သုတေသနအရာရှိ ဘင်ဂျမင် ဇ၀က်ကီး ပါ။ အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်ဟာဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်ရှိရာ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြဆိုကြဖို့ရှိနေတဲ့ အထွေထွေ ညီလာခံ စတင်မယ့် အချိန်နဲ့လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ကုလသမဂ္ဂမှာ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြဆိုကြမယ့် အထဲမှာတော့ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က သူ့ရဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးကြဖို့ အစီအစဉ်လည်း တခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာရုံစိုက်ပြောဆိုဖို့ ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် လည်း ဒီဆွေးနွေးမှုမှာ ပါဝင်ဖို့ရှိနေတာပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း ကတော့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ငြင်းဆန် ထားတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမယ့်၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေ ပါဝင် တက်ရောက်ဖို့ ရှိနေတဲ့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သူ တွေ ရဲ့ နောက်ဆုံးစာရင်းကို အတည်မပြုရသေးဘူးလို့သာ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 4:08 PM0comments
Posted by flyingpeacock at 1:20 PM0comments
အာဏာပိုင်များဘက်မှ သံဃာတော်များကို ဖမ်းဆီးခြင်းများ ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း သံဃာ့အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)က တတိယအကြိမ်မြောက် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်သပိတ်ကို လာမည့် သတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် စတင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။ ( ရိုးမ-၃ )
Posted by flyingpeacock at 11:10 AM0comments
ဗုံးဖောက်ခွဲရေးအမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက် ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ထောင်ချခံခဲ့ရသော အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ဥက္ကဌ ဦးတင်မြသည် ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသည်။
ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်ချခံရပြီးနောက် တနှစ်ခွဲနေခဲ့ရသည်။ အန်အယ်ဒီ ပါတီရှိနေသရွေ့ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မည် ဆိုသော ဦးတင်မြကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
အန်ကယ်က ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ လွှတ်လာတာလဲ။ ခံဝန်လက်မှတ် ထိုးခဲ့ရသေးလား။
လက်မှတ် မထိုးခဲ့ရဘူး။ ကျနော်လွတ်လာတဲ့ပုံက အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ရှိတယ်။ တစ်က နိုင်ငံရေးသမား လွှတ်ပေးတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ နောက်တခုက အသက်ကြီးလို့ဘဲ။
အန်ကယ်ကို ဘယ်အချိန်တုန်းက ဘယ်လိုပုဒ်မနဲ့ ထောင်ဒဏ် ဘယ်လောက် ချမှတ်ခဲ့တာလဲရှင်။
အန်ကယ်ကို ဖောက်ခွဲမှု၊ ထိန်ချန်မှုတို့နဲ့ ၅ နှစ်ချလိုက်တယ်။ မနှစ်က ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ညမှာ ဖမ်းခံရတာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို ကျနော့်မြို့နယ်က လူငယ်တယောက်က ထိုင်းကနေ ပြန်လာတာ ဖောက်ခွဲပစ္စည်း ပါလာတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့က မသိဘူး။ ဖောက်ခွဲပစ္စည်း ပါလာတာ မပါလာတာ မသိဘူး။ သူတို့ဖမ်းမိမှ ကျနော်သိတာ။ ကျနော်မပါမှန်း သိလည်း ဒီကိစ္စမှာ ပါနိုင်တယ် ဆိုပြီး ဖမ်းလိုက်တာပဲ။[ ဆက်ဖတ်ရန် +/- ]
အခုလို လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဘယ်အချိန်လောက်မှ သိရတာလဲရှင်။
ညဘက် ကြေငြာသွားတာကတော့ လွှတ်ပေးမယ် ဆိုတာတော့ သိလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ထဲ လာခေါ်မှ အန်ကယ် လွတ်တယ် ဆိုတာက ၁၀ နာရီလောက်မှ သိတယ်။ သူတို့ ပြောတယ်။ မနက်ဖြန်လဲ ဆက်လွှတ်ဦးမယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု အန်ကယ်ကြားတာက ၁၈ ယောက်ကြားတယ်။
အန်ကယ် ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရော ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလဲရှင်။
ပါတီကြီးရှိနေသရွေ့ ကာလပတ်လုံးကတော့ နိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်အုန်းမှာဘဲ။ အခုလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နည်းမျိုးစုံ လုပ်ကြတာ။ အကုန်သိကြတာဘဲလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း လက်လျှော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အန်ကယ်လဲ လက်လျှော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဆက်လုပ် ရအုန်းမှာဘဲ။ သူတို့မေးတယ် အပြင်ရောက်ရင် နိုင်ငံရေး လုပ်မလား မေးတယ်။ အန်ကယ်က လုပ်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် လေ။
အခုလို လွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ် ဘယ်လောက်ထိ ဝမ်းသာလဲရှင်။
ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျန်တာက အဲဒီလောက် မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်နေကျ ဇတ်လမ်းထဲမှာ ဝင်ကလိုက်တာပဲ။ ဒီလိုဇတ်လမ်းတွေ ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိပါတယ်။ အခုလွတ်တာက မထူးဆန်းပါဘူး။ မထူးခြားဘူး။ အပြင်မှာလဲ ဘာမှမခံစား ရဘူး။ သူတို့လက်ထက်မှာ သူတို့ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ အထဲမှာ နေတာလဲ မထူးဆန်းဘူး။ အပြင်ရောက်လာလဲ မထူးဆန်းဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်ဆက်လုပ်မယ် အဲဒီသဘောပဲ ရှိတယ်။ (မဇ္ဈိမ)
Posted by flyingpeacock at 10:53 AM0comments
မှတ်ချက် ။ ။ ၂၀ -၂၂ အထိမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များဖြစ်ပြီး ကလေး အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။( မဇျ္စိမ )
Posted by flyingpeacock at 8:21 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ အမှု အယူခံကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံး၌ နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက် ပေးရာ ယနေ့ ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်သဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမိန့်ချမည်ဟူ၍ ရုံးတော်က ချိန်းဆို လိုက်သည်။
လွတ်ပေးသည့် အခမ်းအနားအပြီး အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဇော်ဝင်းက ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟူ၍ မရှိဟု ပါရှိသည်။ ( မဇ္ဈိမ )
Posted by flyingpeacock at 8:17 PM0comments
NLD လူငယ်တချို့ အဖမ်းခံရ
အာဏာပိုင်တွေဘက်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမယ်လို့ တဘက်မှာ တိုင်းသိပြည်သိ တရားဝင် ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေပေမယ့်လည်း တဘက်မှာတော့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေက ဆက်လက် ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်တခုက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လူငယ်အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကို မနေ့ညပိုင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေက လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ တဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၃ ဦးက ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိဘူးလို့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက် လက်ရှိမှာ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိတဲ့ တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တခြား တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ သတင်းတွေကလည်း ဆက်တိုက်လို ကြားနေရပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး ဖြစ်ရပ်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်က NLD လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေ အဖမ်းခံကြရတာပါ။
“ကျနော်တို့ဆီက လူငယ် ၄ ယောက် မနေ့က အဖမ်းခံရတယ်။ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ကပါ။ ကိုမင်းမင်းအောင်၊ ကိုသီဟဇော်၊ ကိုကျော်ဝင်းနိုင်နဲ့ မမြင့်မြင့်အေး၊ အဲဒီ ၄ ယောက်ကို မနေ့က ညနေပိုင်းက ဖမ်းပါတယ်။ မမြင့်မြင့်အေး ကတော့ မနေ့ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ သူ့ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ ၃ ယောက်တော့ အခုထိ ကျန်သေးတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတဲ့ သူတို့ဘက်က စွပ်စွဲချက်ကိုတော့ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။”
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းကလည်း မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံမြို့နယ်က NLD ပါတီဝင် မဟုတ်တဲ့ သီးခြား နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ၅ ဦးထက်မနည်းကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီ စက်တင်ဘာလဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု နှစ်ပတ်လည်ကာလ ဖြစ်တာမို့ သံဃာတော်တွေ ဖမ်းဆီးခံရတာတွေ လည်း ရှိထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ညကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်က အဆောင်တခုမှာ နေထိုင်တဲ့ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ လူငယ် ကိုတိုးအောင်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ စုံစမ်းလို့မရဘူးလို့ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုတိုးအောင်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးတင် တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလ တုန်းက ဘုရားပေါ်တက် ဆုတောင်းပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတာကြောင့် အထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အခုတကြိမ်ကတော့ ဘာ့ကြောင့် ဖမ်းဆီးတာလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
အခုအဖမ်းခံရတဲ့ NLD လူငယ်တွေဟာ ပါတီရဲ့ မြို့နယ်လူငယ်အဖွဲ့ခွဲ ဖွဲ့စည်းရေးမှာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကပြောပြီး ဘာ့ကြောင့် ဖမ်းဆီးသွားတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မသိသေးတာကြောင့် စုံစမ်းနေဆဲပဲလို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ နားလည်နေတာ ဒီ လူငယ် သုံးလေးယောက်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ် လူငယ်ဖွဲ့စည်းရေးမှာ ဆောင်ရွက်ကြမယ့် လူငယ်တွေပေါ့။ ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ့် လူငယ်တွေ။ အဲတော့ ဒီအတွက်များ ဖြစ်သလားလို့ ကျနော်တို့ ဒီလိုတော့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ စုံစမ်းနေပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ဘယ်မှာရှိနေလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သိအောင်တော့ ကြိုးစားနေတယ်။ အခြေအနေကတော့ သူတို့စွပ်စွဲချက်ကို ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းဟာ NLD အပါအ၀င် ၁၁ ခုပဲရှိပြီး ဒီပါတီတွေဟာ လည်း စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်၊ ဖွဲ့စည်းခွင့်တွေ မရှိကြပါဘူး။ NLD ပါတီဆိုရင် ဗဟန်းမြို့နယ်က ပါတီရုံးချုပ်မှာ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေနိုင်တာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ပြည်နယ် တိုင်း မြို့နယ်ရုံးခွဲတွေ အားလုံးကို အပိတ်ခံထားရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တရားဝင် မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်၊ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်တွေ ပြုထားတာ ကြောင့် NLD လို တရားဝင် ပါတီတွေကိုလည်း အလားတူ လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုဖို့ သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ NLD ပါတီကနေ မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို စာရေးသား တောင်းခံခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ခုချိန်ထိ အကြောင်းပြန်ကြားတာ မရှိသေးဘဲ စည်းရုံးလှုပ်ရှားတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းတာတွေကိုပဲ လုပ်ဆောင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 8:13 PM0comments
အမေ့ခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အခြေအနေကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ အနေနဲ့ ၀ါရှင်တန်မြို့တော်မှာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) အဖွဲ့ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၂,၂၀၀ ကျော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ပြန်ရင်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်မှာ မနေ့တုန်းကပဲ ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်တိုင်သတင်းသွားယူခဲ့တဲ့ မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Burma Forgotten Prisoners မြန်မာနိုင်ငံက အမေ့ခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာက ၂၀၀၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြထားတဲ့ အစီရင်ခံစာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် မျှမျှတတ တရားစီရင်ခြင်းမရှိဘဲ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချခံထားရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေး၊ နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ဇာဂနာ၊ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရတို့ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံထားရတဲ့ နယ်ပယ်စုံက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဖိနှိပ်တဲ့အစိုးရ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီအစိုးရကို တွန်းလှန်တဲ့ သတ္တိရှင်တွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိပါတယ်လို့ Human Rights Watch အဖွဲ့ရဲ့ ၀ါရှင်တန်မြို့က ဒါရိုက်တာ တွမ် မာလင်နောစကီးက ပြောပါတယ်။ ဒီလူတွေရဲ့ သတ္တိကို နိုင်ငံတကာက မမေ့သင့်ကြောင်းနဲ့ ပြည်သူတွေကို သေနတ်ချိန်ပြီး အုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ သေနတ်တွေကို နိုင်ငံတကာက ၀ိုင်းပြီး ဖယ်ရှားပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ချင်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ သူတို့လိုချင်တဲ့ အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေနတ်မိုး အုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်အစိုးရကြောင့် သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကြားက မြန်မာပြည်သူတွေဟာ သူတို့လိုလားချက်အတိုင်း ဖြစ်လာဖို့ လုပ်နေချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ သူတို့လုပ်နိုင်သမျှ နည်းသုံးပြီး မြန်မာပြည်သူတွေ လွတ်လပ်ဖို့ လုပ်ပေးရပါမယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု နှစ်ပတ်လည်နဲ့ အချိန်ကိုက်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲ ဖြစ်တာမို့ မြန်မာနိုင်ငံ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုရဲ့ ပြည်ပတာဝန်ခံ ဦးပညာဇောတကလည်း မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ရာမှာ အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးအတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက် ထားပြီးတော့ ဒီကိုယ်စားလှယ်ကပဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မူတွေချမှတ်ရေး ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုကိုယ်စားလှယ်မျိုးကို ရည်ညွှန်းပါသလဲလို့ ဦးပညာဇောတကို မေးကြည့်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးခြား အထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့။ အဲဒီ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ ရိုးရိုးကိုယ်စားလှယ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ မူဝါဒရေးရာမှာ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်မျိုး ထားဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲဒီလို မူဝါဒရေးရာ ချမှတ်နိုင်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် ထားခြင်းအားဖြင့် ဒီကိုယ်စားလှယ်က အမေရိကန် အစိုးရကို သူတွေ့ရှိချက်တွေ တင်ပြမယ်။ အမေရိကန် အစိုးရကနေ တဆင့် ကုလသမဂ္ဂလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ၊ အီးယူ အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ၊ အာဆီယံ အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ၊ ဒီလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကို အမေရိကန် အစိုးရကနေပြီးတော့ ပူးပေါင်းပြီး ပါဝင်လာနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်မျိုး ထားရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။”
Human Rights Watch က အမေ့ခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်တာနဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ၂၀၁၀ မတိုင်ခင် ၂,၁၀၀ ဆိုပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း စတင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ အကျဉ်းသား ၂,၁၀၀ ကို ၂၀၁၀ မတိုင်ခင် ပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာ ထောင်ကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဟာ အနာဂတ် နိုင်ငံရေးအတွက် အရေးပါကြသူတွေ ဖြစ်လို့ သူတို့ကို မေ့မထားသင့်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဒု-လက်ထောက် ၀န်ကြီးလည်းဖြစ်၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ စကော့ မာဆီယယ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရ မူဝါဒ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကလည်း မကြာခင်မှာ ပြီးဆုံးတော့မှာမို့ အဲဒီထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်လာရေး ကိစ္စကိုလည်း အလေးထား ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
“အမေရိကန် အစိုးရဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ထောက်ခံလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူတွေအားလုံး စည်းလုံးပျော်ရွှင်ပြီး လွတ်လပ်အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ဖို့ကိုလည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီလို နေထိုင်ခွင့် ရလာစေရေးကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။”
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်မှာလုပ်တဲ့ ပွဲမှာ နောက်ထပ် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သူကတော့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးရေးရာ အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘာဘရာ ဘော့က်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ သူတွေကို မမေ့ဘူးဆိုတာကို ပြသရမယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကို နိုင်ငံတကာက ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ အခြေအနေတွေ အတွက်လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နဲ့ အမေရိကန် အစိုးရက တတ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားမှာပါ” လို့ မြန်မာနိုင်ငံက အမေ့ခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၀ မတိုင်ခင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂,၁၀၀ လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု စတင်တဲ့ပွဲမှာ မစ္စဘော့က်ဆာက ပြောသွားပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
( ဒီမိုဝေယံ )
Posted by flyingpeacock at 8:14 PM0comments
ဒေါ်စုအမှု အယူခံ ကြားနာပွဲ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခွင့် ငြင်းပယ်ခံရ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ် အယူခံဝင်ထားတာမှာ လာမယ့် ၁၈ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး ကြားနာပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်နားထောင်ဖို့ တင်ပြခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်အမှု ကြားနာတာကို နားထောင်ခွင့် ဆိုတာဟာ အခြေခံအခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတဦးက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရုံးကနေ ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တားမြစ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး ခရိုင်တရားရုံးကနေ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ်လိုပြစ်မှုမျိုးကိုမှ မကျူးလွန်တဲ့အတွက် အပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်း တိုင်းတရားရုံးမှာ အယူခံတင် လျှောက်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီလျှောက်ထားချက်ကို တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကြားနာစစ်ဆေးဖို့အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကို ရုံးချိန်းပေးထားပါတယ်။ ဒီကြားနာပွဲကို သူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်နားထောင်ခွင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တောင်းခံခဲ့တာကို အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ တဦးဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေ ကျနော့်ကို လမ်းညွှန်တယ်။ အဲဒီလမ်းညွှန်နဲ့အညီ ကျနော် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခု ပထမဆုံး ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ ၁၈ ရက်နေ့၊ ၁၀ နာရီ၊ အမှုကြားနာမယ့် တိုင်းတရားရုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ကြားနာချင်တယ်။ အဲဒါကို ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ ကျနော့်ကို ညွှန်ကြားတယ်ပေါ့။ အဲဒါကို ကျနော် အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းထားမှုမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ မြင်တဲ့ သတင်းတပ်ဖွဲ့ကို ကျနော် စာတင်ပါတယ်။ စာတင်တဲ့နေ့ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ကပါ။”
သောကြာနေ့မှာ တင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက် စနေနေ့ညနေ ၃ နာရီမှာ ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့က ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ဒီကိစ္စဟာ သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘဲ တရားရုံးနဲ့သာ ဆိုင်တဲ့အတွက် တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားဖို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကာလမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကသာ ဒါကို ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြန်လည် မဖြေကြားတဲ့အတွက် တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်လိုက်တာလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့က ယူဆပါတယ်။ အခုလို ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့က ငြင်းပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ် ဆက်တင်ပြဖို့ရာ အချိန်နည်းပါးနေသလို ရုံးရှေ့ကို ရောက်ဖို့အတွက် တရားရုံးက ကန့်သတ်ထားတာ မရှိဘဲ ငြင်းပယ်လိုက်တာလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးကြားနာတာကို နားထောင်ခွင့်ဆိုတာဟာ အခြေခံအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ဥပဒေကြောင်းအရတော့ ရိုးရိုးလေးပဲဗျ။ သူက ဒါဟာ ဘယ်သူမဆို မိမိရဲ့အမှုကို မိမိ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြားနာခွင့်၊ ဒီဥစ္စာက အခြေခံ အခွင့်အရေးပဲလေ။ ကျနော် အဲလိုမြင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလည်း ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။”
ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး အကြောင်းပြန်တဲ့နေ့ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကို ဒီတပ်ဖွဲ့ကပဲ ခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စရပ်နှစ်ခု အဆက်အစပ် မရှိပါဘူးလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန် ၀ီလီယမ် ယက်တော (John William Yettaw) က သူ့သဘောနဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ထဲ ရေကူးဝင်လာပြီးတဲ့နောက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အကျယ်ချုပ် တားမြစ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မစ္စတာယက်တောကိုတော့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အခြေခံနဲ့ဆိုပြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ် ၀က်ဘ် (Jim Webb) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဥပဒေကြောင်းအရဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အပြစ်မရှိတဲ့အတွက် ဥပဒေအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ရင် လုံးဝ လွတ်မြောက်မယ်လို့ ရှေ့နေတွေက ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
“ကျနော်တို့က ရှေ့နေတွေအဖြစ်နဲ့ ဥပဒေရှုထောင့်က အမြင်ကတော့ လုံးဝ လွတ်မြောက်ရေး ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ဒီလိုမျှော်လင့်တယ်။ ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်း၊ နိုင်ငံရေး ဘာညာ ဒါကတော့ ရှိမယ်။ အဲဒါကို ခြုံငုံပြီးတော့ ကျနော် မပြောနိုင်ဘူး။ ကျနော်ပြောနိုင်တာက ရှေ့နေတယောက်အနေနဲ့ ဥပဒေရှုထောင့်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ဒီလိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အခုလက်ရှိ ချမှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေမှာ ဆရာဝန်တွေ့ခွင့်နဲ့ ဧည့်သည်တွေ့ခွင့်လို တချို့ အချက်တွေဟာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိတဲ့အတွက် ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက် တောင်းခံဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဆီ တင်ပြသွားမယ်လို့လည်း ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသွားပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ နှင့် ဗကသ ၏ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂နှစ်ပြည့်ထောက်ခံ ကြေငြာချက်။(မြန်မာ)
Posted by flyingpeacock at 10:20 PM0comments
အရှင်သောပါကသည် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်ရောက်ရှိနေသာ မြန်မာများရဲ့အမှိုက်ပုံထဲကဘ၀တွေကို စာနာသနားကာ သွားရောက်ကူညီအားပေးနေကြောင်းသိရသည်။ အမှိုက်ပုံတွေထဲတွင် ယင်ကောင်တွေ၊ ရောဂါပိုးပေါင်းစုံရှိသည့်ကြားမှ ကိုယ့်မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် recycle ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းကာ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြင့် အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုနေရပါသည်။ အဲဒီကြားထဲကမှ မကြာခဏဆိုသလို ရဲအဖွဲ့က ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတက်သေးကြောင်း ထိုနယ်စပ်တွင်နေထိုင်နေသူ တစ်ဦးမှပြောပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှင့် ၄င်းတို့ရဲ့အနာဂတ်သည် အထူးစိုးရိမ်စရာကောင်းလှပါသည်။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါက ထိုမြန်မာလူမျိုးများအား သွားရောက်ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု စာရေးသူယုံကြည်မိသည်။ ( ဖြိုးဝေ mmp )
Posted by flyingpeacock at 9:51 PM0comments
Posted by flyingpeacock at 9:38 AM0comments
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပေါ်လစီ အမြန်ထုတ်ပြန်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ရဲ့ မူဝါဒ ပြန်လည်သုံးသပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နယူးယောက် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (HRW) က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်ဆီကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ စာတစ်စောင် ရေးသားပေးပို့ပြီး အခုလိုသာ ပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ နှောင့်နှေးနေရင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကတိက၀တ်တွေဟာ အားပျော့နေပြီလို့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အထင်ရောက်အောင် တွန်းပို့နေသလို ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အဲဒီစာထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့တာ မဟုတ်ဘဲ အကျယ်အပြန့် အထွေထွေ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူတာက မထိရောက်ဘူးလို့လည်း HRW အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ အဓိကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူ တွေကို ရွေးချယ်ပစ်မှတ်ထားပြီး အရေးယူပိတ်ဆို့တာနဲ့ အထွေထွေအရေးယူ ပိတ်ဆို့တာကို လဲလှယ်အစားထိုးသင့်တယ်လို့ HRW အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေ အကြီးအကျယ် ပေးဖို့ကိုလည်း HRW အဖွဲ့က ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးတာခံနေရတဲ့ ကိုညီညီအောင် ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် ရဲ့ မိသားစု မိတ်ဆွေ တဦးဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော် ပါ။ ဒီလို သူဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်လက်ပြီး လိုက်လံကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက်ကိုတော့ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သူနေထိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော် တာဝန်ရှိတွေထံ အကြောင်းကြား အကူအညီ တောင်းခံ ထားတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးမှ နအဖ သို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
ဒီအဖြစ်အမှန်ကိုမထုတ်ဖော်ဘဲ တပ်မတော်ကတော်လှန်လို့သာ ဂျပန်စစ်ရှုံးသလိုလို တပြည်လုံးကို ၀ါဒဖြန့်ထားတာ စစ်တပ်ရဲ့ သမိုင်းအမြင်ပါပဲ။ ဗမာစစ်တပ်တိုက်ယူလို့ လွတ်လပ်ရေးရတာလို့ စစ်ဗိုလ်တွေယူဆထားတာဟာ မှားယွင်းတဲ့သမိုင်းအမြင်ပါ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဟာ အခန်းကဏ္ဍလေး တခုသာဖြစ်တယ်။ စစ်ပြီးခေတ် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲသာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗမာစစ်တပ်ဟာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်နေလို့ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ တိုက်ရိုက်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဥပမာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်လုပ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို သွေးစုပ်ခြယ်လှယ် တယ်ဆိုတာနဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲလို့ လွတ်လပ်ရေးရတာဆိုတဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချက်တွေကို ယုံကြည်လေလေ တိုင်းရင်းသားပြဿနာ ဖြေရှင်းရတာ ခက်လေလေပါပဲ။ မြန်မာ့ပြဿနာဟာ တိုင်းရင်းသားအရေးမှာ အခြေခံတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဗမာလူမျိုး ရောက်မလာမီကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဗမာမင်းကို သစ္စာခံလိုက်၊ တရုတ်လက်အောက်ရောက်သွားလိုက်၊ ထိုင်းကိုသစ္စာခံလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တော့မှ သူတို့ဘ၀ဟာ လုံခြုံသွားတဲ့သဘောပါပဲ။ ရှေးကတည်းက ဗမာမင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အကွဲကွဲ အပြဲပြဲဖြစ်လာတာကို အင်္ဂလိပ်က လိုသလို အသုံးချသွားတာပါပဲ။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူကိုယ် ကယ်တင်ရှင်လို့ ယူဆတာပဲ၊ ၁၉၄၅ မှာ ဂျပန်လက်နက်ချပြီး စစ်တပ်တခုလုံး ဖျက်သိမ်းလိုက်တော့မှ ကယ်တင်ရှင်ဝါဒ နိဂုံးချုပ်သွားတယ်။ စစ်ပြီးခေတ်ဂျပန်မှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ စစ်တပ်မရှိဘူး။ အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ ဂျပန်အရပ်သားအစိုးရက ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကို နာကြည်းခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စစ်မှုထမ်းအလုပ်ကို ဂုဏ်ယူစရာလို့ မယူဆကြတော့ဘူး။ စစ်ရှုံးလို့ရရှိလိုက်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ကတော့ ဂျပန်ပြည်မှာ စစ်ဝါဒကွယ်ပျောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာတာပါပဲ။
Posted by ကိုကိုနာရ်ဂစ် at 1:51 AM0comments